Solar Malezia dia fanjakana kely ao Azia atsimo atsinanana. Ny fifangaroan'ny karazam-piraisam-pirenena samihafa, fivavahana ary kolontsaina no tena mampiavaka ity firenena mahagaga ity. Amin'ny lafiny ara-jeografika, Malezia koa samihafa: zohy miafina any an-tendrombohitra avo, tavy fotsy fotsy, ala maitso mangiran-doza - mahagaga ireo mpizahatany maro isan-karazany manerantany. Avy eo, dia holazainay aminao hoe aiza no hialana sasatra any Malezia ary toeram-ponenana no malaza indrindra amin'ny mpitsidika.
Beach Resorts any Malezia
Ny Fandrosoana an'i Thailand, raha ny tena izy, dia tsy ilay firenena tokana ao Azia atsimo atsinanana miaraka amin'ny moron-dranomasina sandoka sy ny masoandro mangatsiaka. Ary any amin'ny morontsiraka andrefana sy atsinanan'i Malaizia dia misy nosy maro kanto izay mety hifaninana amin'ny hatsaràna amin'ny tora-pasika Thai. Diniho ny tsara indrindra amin'izy ireo:
Island Redang (Pulau Redang) - iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra any atsinanan'i Malezia, izay antsoina hoe "nosy paradise". Misy vitsy mponina eto, izay tombontsoa lehibe ho an'ireo mpankafy mangina ary te hisotro ronono. Ankoatra izany, any amin'ny faritra avaratr'i Redanga dia misy sarisary antsoina hoe torta Turtle, izay ahitan'ny herpetologists sy ny mpankafy ny bibidia rehetra ny atodinan'ny sokatra lehibe, avy eo ny tanora dia miseho. Ho an'ny trano, ny hotely Redang Reef Resort no tsara indrindra any amin'ilay nosy.
Nosy Perhentiana (Nosy Perhentiana) - nosy kely misy nosy akaikin'ny nosy. Redang. Tora-java-boa tsy fantatra, izay mipetraka mivantana eo amoron-trano kanto mampiavaka azy - safidy tsara ho an'ny fitsaharana ara-bola. Ankoatra izany, noho ny tontolon'ny zavaboary an-dranomasina manan-karena, dia ny nosy Perhentiana dia mety amin'ny snorkeling.
Langkawi Permata Kedah no nosy lehibe indrindra ao amin'ny nosy, antsoina hoe faritra tsy misy adidy. Ity toeram-pitsangatsanganana ity any Malezia dia manana fotodrafitrasa mivoatra ary afaka manolotra ireo vahiny any amin'ny hotely, toeram-pisakafoanana ary fialamboly betsaka kokoa noho ny tanàna hafa. Langkawi dia tonga lafatra amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fialan-tsasatra, ary amin'ny fialam-boly mafana kokoa (fanatanjahan-tena, fitsangatsanganana, sns.). Azonao atao ny mijanona ao amin'ny iray amin'ireto hotely manaraka ireto any Langkawi : 5 * Ny Datai Langkawi, 5 * Four Seasons Resort Langkawi, 5 * The Ritz-Carlton, sns.
Ny nosin'i Borneo (Kalimantan no anarany) dia iray amin'ireo nosy lehibe indrindra eran-tany ary toerana mahafinaritra ho an'ny fialam-boly an-dranomasina. Ny borneo any Malezia dia heverina ho anisan'ny tsara indrindra, satria eto, ankoatra ny tora-pasika fasiana ranomandry sy ny rano mangatsiaka kristaly, dia misy fialamboly maro hafa. Noho izany, ny ampahany andrefana amin'ilay nosy dia an'ny National Park Similahau, izay ahafahanao mandehandeha any amin'ny ala mikitroka, mankafy ny hakanton'ny riandrano, mitsidika ireo toerana fanatodizany sy mijery ny biby fiompy.
Ny fisintonana any amin'ny iray amin'ireo firenena tsara tarehy indrindra ao Azia dia mangataka ihany koa, na ireo mponina ao an-toerana sy ireo vahiny vahiny. Na dia eo aza ny fisian'ny toeram-ponenana mihoatra ny 100 ao Malezia, ny tsirairay amin'izy ireo dia manintona amin'ny fomba samihafa. Ireo mpizaha tany niaina dia nanamarika fa akaikikaikin'ny morontsiraka atsinanan'ny fanjakana ireo tranonkala mahaliana indrindra amin'ny fanaraha-maso ny mponina ao amin'ny Ranomasin'i Shina Atsimo. Ireo no nosy Tioman , Laayang-Layang , Sipadan , Kapalai , sns.
Tendrombohitra any Malezia
Ny tontolon'ny firenena samihafa dia ahafahan'ny mpizaha tany hankafy ny ambiny manontolo, na mahatsapa ho kamo eny amoron-dranomasina izany na mitaingina goavana mankany an-tampon'ny tendrombohitra, miaraka amin'ny safidy farany izay tsy ambany noho ny lazan'ny voalohany. Ao amin'ny faritanin'ny fanjakana dia misy toerana mahafinaritra ho an'ity karazana fialantsasatra ity, ka andeha hojerentsika ny tsara indrindra amin'izy ireo:
Highlands Gentians (Avaratr'i Genting) - zaridaina mahavariana iray miavaka, miorina ambony 1,700 metatra ambonin'ny ranomasina. Iray amin'ireo tanàna ambanivohitr'i Malezia malaza malaza indrindra eo amin'ny sisintanin'ny fanjakana 2 - Pahanga sy Selangor. Androany, manana faritany 5 avo lenta ny faritaniny, toeram-pandihizana 3, fiaramanidina 2 ary toeram-pandihizana mahavariana izay tsy mitsahatra mampihetsi-po mihitsy na dia ireo mpizaha tany za-draharaha aza.
Highlands Cameron (Cameron Highlands) - toeram-pivarotana misokatra any amin'ireo taona 1930 sy any avaratra-andrefan'i Pahang. Ny iray amin'ireo toeram-pizahantany tranainy indrindra ao amin'ny firenena, ny faritra afovoan'i Cameron ary hatramin'izao dia tsy manary ny lazany amin'ny fitsidihana vahiny any amin'ny fanjakana. Noho ny fiompiana iray tsy manam-paharoa izay tsy mitovy amin'ireo faritra hafa ao Malezia dia misy flora sy fauna ra tsy dia fahita loatra izay manintona ny mason'ny mponina tsotra sy ny mpahay siansa. Anisan'ny lehibe indrindra amin'ny toeram-ponenan'ny toeram-pitsangatsanganana - toeram-piompiana tranainy, klioban'ny klioban'ny elite, monastera fahiny ary maro hafa. et al.
Inona no akanjo tokony horaisiko any Kambodza?
Inona no hitondrana an'i Indonezia?
Ny vaovao farany avy amin'ny fiainan'i Kristen Stewart
Cytomegalovirus infection amin'ny ankizy
Famaritana ny tranonjaza
Ny satry ny vehivavy amin'ny lamba volon'ondry
Henry Cavill dia lavo niaraka tamin'ilay zazavavin-dandy Lucy Cork
Flight Dutchman - marina sa noforonina?
Nampitombo ny hafanana nandritra ny fitondrana vohoka nandritra ny dingana voalohany
Sokatra mainty hoditra
Sakafo ho an'ny vehivavy bevohoka - 1 trimester
Pancreatin - mari-pamantarana ampiasaina
Leukopenia - ny antony
Pomeranian Pomeranian - ny fiheverana sy ny tsy fisian'ny sokatra
Mosaika ao anatiny
Lalao ho an'ny fampiroboroboana ny fisainana
Noho ny fanasana ny laminasa, tsy nisy fisaraham-panambadiana?
Cholangitis - soritr'aretina
Fanafody ho an'ny fantsika - mianatra mifidy ny fitaovana mety isika ary mampiasa azy tsara
Blaogera misy siramamy
Accessories ho an'ny akanjo mainty